‘एकीकृत पाठ्यक्रमथिमबेस लर्निङ’ - Pradesh Today ‘एकीकृत पाठ्यक्रमथिमबेस लर्निङ’ - Pradesh Today
फागुन ०८, २०७६ उमा भण्डारी
बालबालिकाहरूको वृद्धि विकास र सिकाइका लागि एकीकृत पाठ्यक्रम लागू हुँदैछ । यही शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १–३ कक्षामा एकीकृत पाठ्यक्रम लागू हुँदैछ । एकीकृत पाठ्यक्रममा लेखक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका लेखक, गणित शिक्षा परिषदका केन्द्रीय महासचिव रमेशप्रसाद अवस्थीसँग एकीकृत पाठ्यक्रमका विषयमा रहेर टुडे सम्वादमा कुराकानी गरेका छौं ।
एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको के हो ?
एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको बालबालिकाहरूमा आधारित रहेर बनाइएको पूर्ण पाठ्यक्रम हो । विशेषगरी यो पाठ्यक्रम कक्षा १ देखि कक्षा ३ सम्मका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर बनाईएको छ ।
उदाहरणका लागि अहिले यसमा मेरो परिवार, हाम्रो समुदाय र हाम्रो संस्कृति छ । यी तीनवटा आधारलाई सरकारले नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित र मेरो सेरोफेरो गरी चारवटा विषयवस्तु तोकेको छ ।
अर्थात् अब कक्षा १ देखि ३ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूले चारवटा किताबहरू मात्र पढ्छन् । तीनै विषयवस्तुलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्नेबारे एकआपसमा जोडिएर बनाएको पाठ्यक्रम नै एकीकृत पाठ्यक्रम हो । थिमबेस लनिङ गर्छ । विद्यार्थीले पाठ्पुस्तक हैन विद्यार्थी पुस्तिका पढ्ने हो ।
विशेषगरी एकीकृत पाठ्यक्रम बालबालिकाहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको पाठ्यक्रम हो । यो पाठ्यक्रम समयसापेक्ष भएकाले पनि यसको महत्व धेरै छ ।
शैक्षिक बजारमा सबै विषयको एउटै पुस्तक आउँछ भन्ने सोंचाइ छ । त्यो भन्दा फरक शैलीमा यो पाठ्यक्रम निर्माण भएको छ । किनभने पहिले विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्क पढेका थिए भने अब उनीहरूले ‘विद्यार्थी पुस्तक’ पढ्ने छन् ।
विद्यार्थी पुस्तकका आधारमा शिक्षक निर्देशिका तयार भएको छ । जसमा पाठ्यक्रमलाई कसरी प्रयोग गर्ने, के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्ने र गराउने भन्ने विषयहरू समावेश गरिएका छन् ।
एउटा विषय अर्को विषयसँग सम्बन्धित भएकाले यो पाठ्यक्रम शिक्षक र विद्यार्थीहरूका लागि निकै आवश्यक र महत्वपूर्ण छ ।
के यो प्रभावकारी होला ?
अहिले शिक्षा मानव तथा श्रोत विकास केन्द्रले प्रत्येक स्थानीयतहमा पाठ्यक्रम कसरी प्रयोग गर्ने ? विद्यार्थी निर्देशिका कसरी प्रयोग गर्ने ? भन्ने विषयमा तालिम दिने गरेको छ ।
जसमा हरेक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, सम्बन्धित विषयका शिक्षकहरूलाई कम्तीमा तीन दिनसम्मको तालिम दिने व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ पनि पहिलेको शिक्षण शैली र अहिलेको शिक्षण शैली फरक हुन्छ नै ।
जसका कारण यो पाठ्यक्रम यसरी प्रयोग गर्ने, यो पुस्तिका यसरी प्रयोग गर्ने, यसको प्रभावकारीता यस्तो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायका सरोकारवालाहरूले समयमै बुझ्न पाउँछन् ।
बुझाउन समस्या हो भनेर जानसके धेरै प्रभावकारी छ । यदि कार्यान्वयन पक्ष बलियो भयो भने यसले शैक्षिक क्षेत्रमा यसको प्रभावकारीता राम्रो हुने देखिन्छ । सबैको समन्यव भएका परिवर्तन हुने छ ।
स्थानीय तहको पाठ्यक्रमसँग जोडिने अवस्था छ की छैन ?
नेपाल सरकारको जुन पाठ्यक्रम संरचना छ । उक्त संरचनामा केही मुख्य पाठ्यभारहरू संघीय सरकारलाई जिम्मा दिइएको छ भने केही पाठ्यभारहरू स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिइएको छ ।
जसमा स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा काम लाग्ने गरी अतिरिक्त पाठ्यक्रम तयार पार्न सक्छन् । यसले सरकारले बनाएको पाठ्यक्रमलाई कुनै असर गर्दैन ।
स्थानीय तहका फरक–फरक आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि सरकारले यो व्यवस्था पहिलेदेखि नै गरेको थियो तर प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
तर अहिले स्थानीय तह आफैमा सजक भएकाले सरकारले किटान गरेको विषयवस्तुमा टेवा पुग्ने गरी स्थानीय पाठ्यपुस्तक बनाउन सक्छन् । जसले गर्दा सरकारले बनाएको पाठ्यक्रमलाई टेवा पु¥याउने देखिन्छ ।
किन पाठ्यक्रम फेरेर निर्माण गर्नुपर्ने भयो ?
कुनै पनि देशको पाठ्यक्रम प्रत्येक १० वर्षसम्म चल्नुपर्छ । त्यसपश्चात् उक्त पाठ्यक्रम फेरिनु पर्ने मान्यता छ । समय अवधीको हिसावले पनि पाठ्यक्रम परिमार्जित गर्नुपर्ने थियो ।
अर्को के हो भने पहिले शिक्षक केन्द्रित विधिमा जोड दिईन्थ्यो भने अहिले विद्यार्थी केन्द्रित विधिमा जोड दिनुपर्ने मान्यता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको छ ।
समयअनुसार पाठ्यक्रममा विभिन्न विषयहरू समावेश गुर्नपर्ने, शिक्षक विधिहरू फेर्नुपर्ने भएकाले पनि यो पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिएको हो ।
यस्तै शिक्षक क्रियाकलापलाई परिमार्जित गरी सिकाइ क्रियाकलाप बनाईएको छ भने पढाइलाई सिकाइमा परिवर्तन गरिएको छ । विशेषगरी समयसापेक्ष विषयवस्तु र शब्दावलीलाई ध्यान दिएर नै यो पाठ्यक्रम तयार गरिएको हो ।
निजी विद्यालयमा प्रगोग होला त ?
म आफैले बुझेअनुसार निजी विद्यालयले पनि यस पाठ्यक्रमलाई स्वीकार गरिसकेका छन् । निजी बिद्यालयसँग सम्बन्धित रहेर पाठ्यपुस्तकहरू लेख्ने भएकाले पनि मैले निजी विद्यालयहरूलाई नजिकिएर बुझेको छु ।
निजी विद्यालयहरूमा लागू हुने पाठ्यसामाग्रीहरू पनि नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृत गरेपछि मात्र लागू हुने हो । यसरी निजी विद्यालयका पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने समयमा विषयवस्तुलाई के कसरी परिमार्जित गर्ने विषयमा सरकार लागिरहेको अवस्था छ ।
विशेषगरी निजी विद्यालयका क्रियाकलापहरूमा सरकारको तालिम र पहुँच पुग्न नसकेकाले उनीहरूलाई कसरी जानकारी गराउने ? भन्ने विषय समस्या बनेको हो ।
तर पाठ्यक्रम भनेको कुनैपनि विद्यालयको शैक्षिक शत्र सुरू हुनुभन्दा अगाडिको विषय भएकाले यसमा हरेक व्यक्तिले पाठ्यक्रममा हुनुपर्ने विषयवस्तु सामाग्रीहरू प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ भन्न भन्ने मलाई लाग्छ ।
यसर्थ पनि पाठ्यक्रमलाई निजी विद्यालयहरूले बुझेर सोही अनुसार पाठ्यसामाग्री निर्माण गर्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रकाशन गृहहरूले एकीकृत पाठ्यक्रमलाई कसरी लिएका छन् ?
निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रकाशकले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । म पनि लेखक भएका कारण सबैले यसको महत्व बुझ्नुपर्छ ।
आफ्नो लगानीलाई सुरक्षित गर्नका लागि प्रकाशकहरूले विद्यार्थीहरूलाई अत्याधिक भार दिनुभन्दा पाठ्यक्रम अनुरूप विभिन्न क्रियाकलापहरू दिएर आफ्ना सामाग्री तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको जानकारी अनुसार मेघा पब्लिकेसन प्राईभेट लिमिटेले विद्यार्थीहरूलाई सजिलो हुने तरिकाले सामाग्रीहरू तयार गरेको छ ।
यसले एकीकृत पाठ्यक्रम तयार गरेको बुझेको छु । मेघाजस्ता नेपालमा अहिले ९९ वटा प्रकाशकहरूले पाठ्यक्रम अनुसार आफ्ना सामाग्रीहरू स्वीकृत गरिपाउँ निवेदन गरेका छन् ।
यसर्थ जति पनि प्रकाशकहरू छन् उनीहरूले नेपाल सरकारले बनाएको पाठ्यक्रमअनुरूप पाठ्यसामाग्रीहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले पनि पाठ्यक्रमले उत्पादन सामाग्रीहरू बजारमा गएका छन् की छैनन् ?
कति प्रभावकारी भएका छन् भन्ने विषयमा अनुगमन तथा निगरानी गर्न जरूरी हुन्छ । सरकारले उत्पादन गरेका सामाग्री र निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका सामाग्रीहरू मात्रात्मक रूपमा फरक होलान् । तर ति कुराहरू पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको परिधिभित्र रहेर बन्ने हुनाले त्यस्तो कुनै फरक हुँदैन ।
निजी र सरकारी पाठय्पुस्तकमा एकरूपता ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
नेपाल सरकारको एउटा आफ्नै परिधि हुन्छ । त्यो परिधिभित्र यति पृष्ठको किताव उत्पादन गर्ने भन्ने नीति हुन्छ । त्यहीअनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि निजी प्रकाशनहरूलाई यति पृष्ठको किताबलाई यसरी उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने निर्देशिका दिने गर्दछ सोही अनुसार प्रकाशकहरू जाने गर्दछन् ।
तर कतिपय निजी विद्यालयहरूमा सरकारले स्वीकृत नगरेका पाठ्यपुस्तकरू पढाइरहेका अवस्था अझै पनि छ । जसले बालबालिकाहरूमा पढाइको भार दिएकै हो ।
तर अब हामी धेरै विषयवस्तु पढाउनेभन्दा एउटै विषयवस्तुलाई राम्रोसँग पढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यसर्थ अबका आउने दिन निजी क्षेत्रले पनि यस विषयमा सुधार गर्दै गयो भने पृष्ठहरू थोरै धेरै होलान् तर फरक केही भने हुने छैन ।
एकीकृत पाठ्यक्रम कक्षा १ देखि १० सम्म लैजान सक्ने अवस्था कस्तो छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ८ वर्षभन्दा मुनिका विद्यार्थीहरूलाई एकीकृत पाठ्यक्रम बढी उपयुक्त देखिएको छ । अन्य देशहरूमा हेर्दा एकीकृत पाठ्यक्रमलाई एउटा विषयको रूपमा राखिएको हुन्छ । जहाँ माथिल्लो तहसम्मका विद्यार्थीहरूमा आधारित पाठ्यक्रम हुन्छ ।
तर हाम्रो देशमा बच्चा खेल्ने उमेरमा पाठ्यभार दिएर पढाउने गरिन्छ । माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीहरूमा फरक–फरक तरिकाले विषयवस्तुको ज्ञान दिनुपर्ने, विषयगत शिक्षकहरू ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले नेपालको सन्दर्भमा माथिल्लो कक्षामा यो सम्भव छैन ।
तर कक्षा १ देखि ३ सम्मका लागि यो पाठ्यक्रम किन सम्भव छ ? भने विद्यार्थीहरूलाई विषयवस्तुका बारेमा धेरै जानकारी दिनुभन्दा पनि विद्यार्थीहरूलाई विषयप्रति रूचि राख्न सक्ने बनाउनुपर्ने हुन्छ । विषयप्रति आकर्षित गराउनुपर्ने भएकाले यो कक्षा १ देखि ३ सम्म नै उपयुक्त छ ।
अव विद्यार्थीहरूलाई पढाउने होइन सिकाउने हो । शिक्षक केन्द्रित विधिलाई विद्यार्थी केन्द्रित गराउनुपर्छ । विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यक्रमको जानकारी गराउँदै सोहीअनुसार पढाउनुपर्छ ।
सिकाइ उपलब्धि हुने तरिकाले पाठ्यपुस्तक नभई पाठ्यक्रम पढाइ हुनुपर्छ । सिकाइ प्रक्रियालाई समयानुकूल परिवर्तन जरूरी छ । एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको विद्यार्थीहरूमा आधारित रहेर सिकाइने पाठ्यसामाग्री भएकाले शिक्षा सरोकारवालाहरूले यसलाई राम्रोसँग बुझेर प्रत्येक विद्यालयका प्रत्येक कक्षामा लागू गर्न आवश्यक छ ।
रावत समाजको दोस्रो अधिवेशन